Archive du 20170104
Fanovana Governemanta Minisitra 20 mihozongozona seza
Alefa miandalana fa tsy tonga dia ho faobe ny fanoloana ny mpikambana ao anatin�ny governemanta Solonandrasana Mahafaly raha ny resaka re farany
Antenimierandoholona Vahiny voalohany nitsidika ny Frantsay
Asa avy hatrany no nisantaran�ny FIlohan�ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honor� ity taona 2O17. Nandray ny Senatera frantsay Oliver Cadic sy ny Ambasadaoro Frantsay miasa sy monina eto amintsika Ramatoa V�ronique Vouland izy omaly talata 3 janoary maraina tetsy amin�ny lapan�Anosikely.
Depiote Razafitsiandraofa Jean Brunel Ilaina ny fitantanana mangarahara
Tokony ho vaindohan-drahara hataon'ny fitondram-panjakana mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao,
Me Hanitra Razafimanantsoa Mila fifanatonana ny Malagasy
Noho izao fahatratrarana ny taona vaovao 2017 izao dia faly miarahaba ny vahoaka Malagasy tsivakivolo ny tenako amin'ny maha-sololmbavambahoakan'i Madagasikara ahy sy maha-filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritananin'Antananarivo manokana ihany koa, hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa avy amin'ny antoko TIM.
Lapam-panjakana Iavoloha Ho avy eny i Dada
Hotontosaina ny 6 janoary 2017 eny amin�ny lapam-panjakana Iavoloha ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona vaovao eo amin�ireo andrimpanjakana Malagasy miaraka amin�ny solontenan�ireo firenena manana masoivoho miasa sy monina eto Madagasikara.
Tandremo sao mijoboka e
Miarahaba anao jean a !Asa ry jean na ilay taratasy farany nalefako tany aminao no nahatezitra anao na ilay andro mafana fa toa hoe kizitina be mihitsy hono ianao tamin�ity taom-baovao ity ary tsy dia hita matetika anaty birao a ! Sa tena mbola makafoka be ..
Air Madagascar Hahazo ATR roa indray
Hiroso amin�ny fanofana fiaramanidina roa vaovao dia ATR 72-500 sy ATR 72- 212 ny Air Madagasikara ary efa nanaiky ny hamoahan�ny minisiteran�ny vola ny antoka momba izany ny filankevitry ny governemanta notanterahana omaly teny Mahazoarivo.
Lozam-pifamoivoizana tao Ilempona Tafiakatra 7 no maty
Tafiakata ho 7 no maty vokatr�ilay lozam-pifamoivoizana nahatsiravina ny alatsinainy hariva tao Ilempona
Mpitsoka mozika mitety tan�na Mahazo 10.000 Ar isan�andro ny olona iray
Fanafihan-jiolahy nahery vaika Tovolahy 19 taona maty voatifitra, 3 tapitrisa Ar voaroba
Noho ny tahotry ny vavam-basy dia tsy nisy sahy namonjy sy nanavotra ny niharam-boina ireo mpiara-monina teo an-tan�na, ka niliba tamin'ny asa ratsiny ireo jiolahy.
Vono olona feno habibiana Lehilahy iray maty notsatotsatohana antsy
Hatairana ny an'ireo mponina tao Mangarivotra-Mahajanga raha nahita raim-pianakaviana iray efa nitsirara, nihosin-dra sady tsy nisy aina intsony
Sao ho diso fanantenana e !